jeudi, 11 avril 2019 14:33
EPP Ambohimiandra: Nitondra vatsy ho an’ny mpianatra i Lanto Rakotomanga
Amin'ny maha Reny azy, no nambarany fa nanaovany izao tolotanana izao. “Fantatro ny manahirana anareo, ary tsy hamela anareo ho irery aho, fa hiady ho anareo”, hoy i Lanto Rakotomanga raha nitsidika sy nampahery ireo zaza mianatra ao amin’ity EPP Ambohimiandra eo anivon’ny Boriboritany faha-II izay Antananarivo Renivohitra ity, omaly maraina. Nanamarika ny fandalovany teny, ihany koa ny fifanakalozana sy tafatafa tamin’ireo Ray aman-drenin’ny mpianatra. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Faritra Boeny
Notokanana ny sabotsy 06 sprily 2019 teny amin’ny CEG Antanimalandy Mahajanga, ny trano fianarana roa lehibe ahitana efitra roa avy. Fiaraha-miasa avy amin’ny governemanta japoney no nahazoana izao foto-drafitra izao. Ny 31 janoary 2017 ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-panomezana teo amin’ny Masoivohon’i Japon sy ny CEG Antanimalandy. Mitentina 225 tapitrisa Ariary (69 464 euros) no teti-bidin’ny dabilio vaovao sy ireo trano roa misy efitrano roa avy ireo, izay trano fanitso tany am-piandohana ka narodana. Ny kilasy faha-4 no hisitraka ireo efitrano vaovao ireo.
Fanatanterahana tetikasam-pahasalamana “Accessible Continuum of Care and Essential Services (ACCESS)” izy ity, izay haharitra dimy taona, ary vatsian'ny USAID vola mitentina 90 tapitrisa dolara. Mikendry indrindra ny hanatsara sy hanitatra ny asam-pahasalamana omena ny vahoaka Malagasy ny tetikasa.Vahoaka eo amin’ny 16 tapitrisa eo ho eo no handray tombontsoa avy amin'ny tetikasa ACCESS, izay hiasa any amin'ny faritra 10 eto Madagasikara (Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Menabe, Melaky, Boeny, Sofia, DIANA, SAVA ary Analanjirofo).
15 taona tsy nisy fampiasam-bola hamatsiana rano teto Antananarivo Renivohitra, izay no nambaran'ny praiminisitra Ntsay Christian ka izay no nambarany fa mahatonga ny fahampian-drano eto. 200 000 m3 isan'andro ny tolotra misy nefa 320 000 m3 ny filàna rano. Hisy araka ny nambarany ny fanorenana fotodrafitrasa hanampiana ny efa misy, hampitomboana ny famatsian-drano eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina, ka hotrandrahana ny reniranon'Ikopa hamatsiana ny faritra atsinanan'Antananarivo. Hisy koa fanaovana "forages" eny Itaosy sy Ambohidrapeto.
Mankalaza ny Jobily faha-25 taona naha Mpitandrina an-dRandrianarisoa Satarivony ny FJKM Mahazoarivo Fanilo-Fitahiana - Antananarivo II. Nisy ezaka fanangonam-bola natao ny sabotsy 30 martsa teo, hanamboarana trano ho an’ny Mpitandrina sy fianakaviany izay handeha hisotro ronono. Nanome biriky 10 000 isa Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida solombavambahoaka narotsaky ny Tiako i Madagasikara ao amin’ny Boriborintany faha-II ho anjara birikiny amin’izany. (Jereo Sary Tohiny)
FITEFA: Mandray anjara amin’ny famerenana an’i Madagasikara ho Nosy maitso
Nanao rodobe namboly hazo teny amin’ny tanin’ny “Séminaire propedeutique” an-dry mompera eny Amboara – Ambohidratrimo, ny sabotsy teo, ireo mpikambana FITEFA (Fikambanan’ny Teraky ny Faritanin’Antsiranana) notarihin’ny filohany Bekasy Jonhfrince. Nahatonga solontena nandray anjara tamin’izany koa ny avy any amin'ny faritra. Efa programan’ny FITEFA ny hiaro ny tontolo iainana ka nanokana ity andro ity izahay hambolena zanakazo miisa 1600 fototra eo, hoy i Bekasy sady hamaliana ny antso fanentanana nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny tokony hambolena hazo 5 isan’olona, isan-taona.
dimanche, 07 avril 2019 16:42
Randrianarisoa Stanislas: Miara-mientana amin’ny tanora ho fampandrosoana ny taranja tsipy kanetibe
Ela no nanirian’ny tanora tato amin’ny Boriborintany faha-II Antananarivo Renivohitra toeram-pilalaovana tsipy kanetibe manara-penitra. To izany ankehitriny, noho ny tolotanana nataon’i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, araka ny ahalalan’ny maro azy. Vita ankehitriny ny kianja eo Ambohipo, ary afaka misitraka izany ny mpitia tsipy kanetibe rehetra. Nankasitraka izao hetsika fiaraha-mientana nataon’i Rastany, izay kandidan’ny TIM K25 amin’ny fifidianana solombavambahoaka, izao ho fampandrosoana ny taranja tsipy kanetibe ny tanora eto amin’ny Boriborintany faha-II. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 07 avril 2019 14:13
Fisotroana toaka: Faha-38 aty Afrika i Madagasikara
Na dia mirongatra etsy sy eroa aza ny fivarotan-toaka eto Madagasikara dia amin’ny ankapobeny 0,92 litatra isan’olona, isan-taona ny fatran’ny toaka sotroin’ny Malagasy iray mihoatra ny 15 taona, tarehimarika izay mametraka an’i Madagasikara eo amin’ny laharana faha-38 amin’ireo firenena 49 nanaovana fanadihadiana araka ny notaterin’ny Agence Ecofin tamin’ny 2017.
samedi, 06 avril 2019 12:26
Toamasina: Nitsidika ny Hopitaly be i Irmah Naharimamy
Tonga nitsidika ny Hopitaly be CHU Analankininina ny kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Irmah Naharimamy. Nitondra fanampiana sy fitaovana fanadiovana toy ny koveta sy angady, ary tsy adino ny baolina hanaovan'ireo mpiasa fanatanjahan-tena. Tao anatin'ny hafaliana moa no nanaovana izany, satria fantatra ny hamafin'ny asa sahan'ireto mpitsabo sy mpanampy azy ireo ireto. Nisy moa ny tantsoroka nomena ireo marary anamaivana ny fitsaboana.
samedi, 06 avril 2019 09:20
Ambatomaro Boriboritany faha II: Nitsidika ireo mpamaky vato i Lanto RAKOTOMANGA
Mitohy hatrany ny fitsinjovana ireo mponina ataon’i Lanto RAKOTOMANGA. Teny amin'ny famakiambato Ambatomaro boriboritany faha II izy omaly. Toerana iray izay misedra ny sarotra tokoa noho ny maha toerana avo azy, maro ny olana izay sedrain’ireo mponina eny, raha tsy itanisa afa tsy ny fahasahiranana momba ny rano eny an-toerana. Efa mpitsidika matetika ny mponina eny Ambatomaro i Lanto RAKOTOMANGA, koa nitondra ny valin’ny hetahetan’ny mponina teny, ary nanolotra fitaovana maromaro, toy ny semenitra, hazo, biriky, fantsika, tafo, hanorenana akanin-jaza sy sekoly ho an’ireo zanaky ny mpamaky vato.